के सा’उथ इ’न्डियन फिल्ममा डे’ब्यु गर्दै छिन स्वस्तिमा ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारके सा’उथ इ’न्डियन फिल्ममा डे’ब्यु गर्दै छिन स्वस्तिमा ?
के सा’उथ इ’न्डियन फिल्ममा डे’ब्यु गर्दै छिन स्वस्तिमा ?
काठमाडौं– पछिल्लो समय नायिका स्वस्तिमा खड्काले दक्षिण भा’रतीय फिल्ममा अभिनय गर्ने खबरहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । छोटो समयमै नेपाली फिल्ममा चर्चा ब’टुल्न सफल स्वस्तिमाले दक्षिण भा’रतीय फिल्ममा काम गर्ने पक्का भएको खबर बाहिर आइरहेका छन् । नेपाली चलचित्रमा नायिका स्वस्तिमा खड्काको चर्चा चु’लिदो छ । चलचित्र ‘बु’लबुल’मा काम गरिसकेपछि उनको च’र्चा चु’लिएको हो ।उनै, स्वस्तिमाले एउटा साउथ चलचित्रमा काम गर्ने पक्का भएको खबरहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
स्वस्तिमाले ए’ञ्जल मा’रिया सि’नेमासँग नेपाली चलचित्र निर्माण कम्पनी अनन्या फिल्मस्ले बनाउन लागेको ‘थि’रिमाली’मा काम गर्ने पक्का भएको खबर सार्वजनिक भैरहेको छ । यसअघि पनि स्वस्तिमाले एक अ’ङग्रेजी फिल्ममा अभिनय गर्ने फा’इनल भइसकेको छ ।उक्त फिल्ममा स्वस्तिमाले भु’टानी श’रणार्थीको भूमिका नि’भाउँदैछिन् ।यसबारेमा स्वस्तिमाले आफै स्पष्ट पारेकी थिइन् । दक्षिण भा’रतीय फिल्मको नाम ‘थि’रीमाली’ राखिएको छ । उक्त फिल्ममा वि’विन ज’र्ज, जो’नी ए’न्टिवनी, ध’र्मजन वो’लगाट्टी, आ’ना रे’श्मा लगायतका कलाकारको अ’भिनय रहनेछ ।
यस्तै मा’ओत्से गुरुङसहित अन्य केही कलाकारको समेत अ’भिनय रहने जनाइएको छ । यद्यपि फिल्ममा नेपाली कलाकार को को रहने भन्ने अझै फा’इनल भइनसकेको स्रोतले बताएको छ । नेपालमा समेत छा’यांकन गरिने यो फिल्ममा स्वस्तिमाको भूमिका कति रहने भन्ने पनि खुलाइएको छैन । यता स्वस्तिमाले पनि फिल्ममा अ’भिनय गर्नेबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएकी छैनिन् ।